Ngaba unganditshela indlela yokubeka phezulu kwi-Amazon?
Masibhekane nayo - ngaphezu kwe-50% yazo yonke i-intanethi yosesho lwemveliso ekuqaleni iza ne-Amazon. Ukuqwalasela ukuba sele sele isisombululo esomeleleyo kwingxenye yengonyama yabathengisi be-intanethi, umbuzo wokuba uphakame kangakanani kwi-Amazon ngoku umcimbi oshushu. Yaye yenza ngakumbi kunokuba ungacinga, ngenxa yokuba abaninzi bethu bazama ukutyelela i-Amazon ngaphambi kwayo nayiphi na enye into, ubuncinane xa sifuna ukujonga ixabiso lomkhiqizo othile ngaphambi kokutyelela isitolo. Ngoko, umbuzo uwukuthi - njani ukuphakamisa phezulu kwi-Amazon kwaye ufumane ezininzi kwiinkcukacha zakho zemveliso. Kwaye impendulo emfutshane kakhulu ibonisa ukuba kusetyenziswe i-SEO tactics eziphambili ukuza kubonisa uluhlu lwemveliso kwi-Amazon ethengisa ngokuthe ngqo. Ndiyathemba ukuba eli khokelo elifutshane liyakunceda usinde phantsi komncintiswano okhuphisayo olawulayo kwiwebhusayithi enkulu yokuthengisa kwi-intanethi kwihlabathi. Ekugqibeleni, ukuba ngumthengisi ohamba phambili kwi-niche yakho uhlala eqhuba isinyathelo esinye phambi kweentengiso zakho ezikufutshane.
Indlela Yokubeka I-Higher On Amazon - ii-SEO ezisisiseko
Zonke malunga ne-Amazon SERPs
Ukwazi zonke i-ins kunye nokuphuma kwe-SERP kwi-Amazon inokubaluleka ngokwenene ukuphucula uluhlu lwemveliso yakho ekuchithweni kwe-intanethi ngaphaya kwalo. Enyanisweni, i-Amazon isebenzisa iifom ezimbini eziphambili ukubonisa iphepha lemiqhamo yalo mveliso - mhlawumbi kunye nomboniso woluhlu, okanye ukuboniswa ngendlela yegalari. Ngelo xesha, nangona kunjalo, kukho ezinye iindawo eziboniswe kwi-SERPs ze-Amazon, ngasinye nesiphumo sayo sokwenza uphando kunye nezinto ezithile zeentengiso.
I-View View - ineziphumo zemveliso ezili-15 ezimalunga nawo onke amasebe.
Igalari ye-VIew - ihambisa ikhasi ngalinye ngeziphumo ezingama-24 zomkhiqizo eziboniswayo xa zicela amasebe athile okanye iintlobo zenkcubeko.
IiMida zoHlabathi - ziboniswe kwicala lasekhohlo lephepha lewebhu (ngaphandle koko, izihlungi zebarbar). Kuthetha ukuba yonke into kunye neyona nkcazelo ebaluleke kakhulu yoluhlu lwakho lwemveliso kwi-Amazon kufuneka lube luleke ngakumbi kumsebenzi wakho wokwenza umsebenzi.
Uluhlu oluxhaswa - lubonisa ukunikezelwa okunikezelwayo kwintsimi engezantsi ye-SERP. Ngokuqhelekileyo, uluhlu lwemveliso oluxhaswa yi-Pay-Click Click. Ngako oko bavame ukuba nokufakwa kwegama elingundoqo (njengoluhlu lweGoogle lweziphumo zophando ngezinye iinkcukacha kubonisa ulwazi olongezelelweyo olusekelwe kwiintengiso ze-AdWords).
Ukukhangela iziphumo ezisekelwe kwi-Amazon kwi-Amazon
Iipropati zokubaluleka eziphambili eziphambili ukuqonda indlela yokubeka phezulu kwi-Amazon. Kuthetha ukuba ngolwazi oluqinileyo lweempawu zemibuzo elandelayo yama-Amazon unokukwenza lula ukuba iimveliso zakho ziboniswe phambi kwabaphulaphuli abajoliswe kuyo, abaninzi abathengi abanokuthi baphuhliswe babe yinyani. Nazi izinto ezintathu eziphambili ezifanele ukuhlolisisa ukuba ufumane umfanekiso opheleleyo we-Amazon SEO.
Iimpawu eziqingqiweyo zemibuzo ye-Amazon
Imida engundoqo - amagama angundoqo agcwaliswa kwibha yokukhangela ngumsebenzisi ukuba abekwe yi-Amazon kwi-URL ye-SERPs ngesicelo.
I-Node - iyaziwa ngesibini kwimibuzo ebalulekileyo, emele inombolo ethile yenombolo (ngaphandle koko, i-ID echaphazelekayo), ehambelana ngqo neentlobo zemveliso kwi-Amazon.
I-Brand Brand - imela indawo yentengiso, enokukunceda kakhulu ukuvavanya nokulinganisa umkhiqizo wakho malunga nabathengisi abasondeleyo banikezela uphawu olufanayo.